Filed under: အတွေးအမြင်, ဆောင်းပါး, ဓာတ်ပုံ (Pictures) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 10:08 am
ဒီမှာက အစိုးရ ကျောင်းတွေမှာ ကျမတို့ငယ်စဉ်ကလို ရွှေတံဆိပ်၊ ငွေတံဆိပ်၊ ကြေးတံဆိပ်ချီးမြင့်တဲ့ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲတွေ မရှိပါဘူး။
ကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်.. ဆရာကန်တော့ပွဲတွေလည်း မရှိပါဘူး (မရှိရဘူး မဆိုလိုပါဘူး။ သူ့တိုင်းပြည်နဲ့သူ ရှိသင့်ပါတယ်။ မရှိကြောင်းသာ ပြောပြခြင်းပါ.. အဖွားတွေ အဒေါ်ရင်းတွေကိုယ်တိုင် ဆရာမများ၊ ကျောင်းအုပ်များဖြစ်ပါတယ်)
အတန်းတွေထဲမှာလည်း အတော်ဆုံးဆိုတာ မရှိသလို အညံ့ဆုံးဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီမှာ Grade A, B, C စသည်ပဲ ခွဲပါတယ်။ ကိုယ်က သခ်ျာမှာ A ရသော်လည်း Health မှာ C ရချင်ရမယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက သခ်ျာမှာ B ရသော်လည်း သိပ္ပံမှာ A ရချင်ရမယ်။
ရီပို့ကဒ်ပေးရင်လည်း စာအိတ်လေးကိုယ်စီနဲ့ ပေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲ A တွေချည်းပဲရသလား၊ B ဘယ်နှစ်ခုလည်း C ဘယ်နှစ်ခုလည်း အချင်းချင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရှဲချင်ရှဲကြပေမယ့်၊ အတန်းထဲမှာကတော့ ဘယ်သူအတော်ဆုံးဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ရှိခဲ့ရင်တောင် ဆရာ/ဆရာမတွေမှာ ကလေးတွေ စိတ်ကြီးဝင်အောင် သို့မဟုတ် စိတ်အားငယ်အောင် ပြုမူပြောဆိုခြင်း မရှိ/မရှိရပါဘူး။
အတန်းသားအချင်းချင်း သူတစ်လူငါတစ်မင်း စာပြိုင်တာ မရှိတော့ပါဘူး။ ပြိုင်မယ့်ပြိုင် ကိုယ့်ပေပါနဲ့ကိုယ်ပြိုင် ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တီထွင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်နဲ့ကိုယ် ပြိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ကိုယ်သာ ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်သွားပါပြီ။
Filed under: ၀တ္ထု (Novels) — မလေး @ 11:58 am
လူတွေ တန်းမစီတဲ့ အကြောင်းတွေဖတ်နေရလို့ ရယ်စရာအကြောင်းလေးတွေ မိတော သတိရမိတယ်။
ရန်ကုန် Ocean မှာ အသီးအနှံ၊ သစ်သီးဖျော်ရည် စသည်.. မကြာခဏဝယ်ဖြစ်တော့ checkout counter မှာ တန်းစီနေတဲ့တစ်ရက် ရှေ့မှာတစ်ယောက်ရှိနေတော့ space ပေးတဲ့အနေနဲ့ နည်းနည်းခပ်ခွာခွာ ရပ်နေမိတယ်။ အဲဒါအနောက်က ရပ်နေတဲ့တစ်ယောက်က အရမ်းလိုက်ကပ်နေတော့ မနေတတ်တော့လို့ ရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးပေးတယ်။ တိုးပေးတိုင်း နောက်က အရမ်းလိုက်ကပ်၊ ရှေ့ကိုတိုးပေးလိုက်၊ နောက်ကကပ်လာလိုက်နဲ့ ရှေ့ကတန်းစီနေသူနဲ့ထိတော့မယ်။ နောက်က အစ်မကြီးကို မိတော လှည့်ကြည့်ပြီး အရမ်းကပ်နေပြီဆိုတာကို အမူအယာနဲ့အချက်ပြမိတာမှာ ပိုဆိုးသွားတယ်။ မိတောရဲ့ ခါးကိုလာကိုင်ပြီး ရှေ့ကိုတိုးဖို့သူက လုပ်သေးတာ။ တစ်ခါမှ ခါးကိုကိုင်တာ မကြုံဖူး၊ ယားကလည်း ယား။ သူ့ကို မျက်လုံးပြူးပြီး တစ်ချက်ထပ်လှည့်ကြည့်တယ်။
အဲဒီအစ်မကြီးကို မိတောက အမူအယာနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အချက်ပြတာ၊ အဲဒါလည်း မရဘူး။ ရှေ့ကတစ်ယောက်ပြီးသွားလို့ ကောင်တာက တစ်ယောက် လုပ်လက်စလေးတွေ လက်စသပ်ပါစေဦးဆိုပြီး မိတော စောင့်၊ လက်ထဲက ပစ္စည်းလေးတွေ ကောင်တာပေါ်တင်ဖို့ ဟန်ပြင်ရုံရှိသေးတယ်။ သူက မိတောကိုကျော်ပြီး သူ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကို တင်လိုက်တယ်။
မိတောလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ သူ့ကို ကြည့်နေတော့.. အံမယ်.. သူက ဆတ်ကနဲမေးငေါ့ပြသေးတာ.. တင်လေပေါ့.. မင်းပစ္စည်းနဲ့ ငါ့ပစ္စည်း အတူတူရောတင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံ။
Filed under: ၀တ္ထု (Novels) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 3:00 pm
♪♫~ ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ အငြင်းအခုံမရှိ သံယောဇဉ်ဖြတ်တဲ့နည်း..~♪♫
ပညာတတ် - မိတော
Filed under: ၀တ္ထု (Novels) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 12:21 pm
ထိုနေ့က ကိုရင်နှင့်မိတောသည် ကားဆီအကပ်လေးနှင့် ကျောက်တန်းဘက်မှ ပြန်လာကြလေသည်၊။ ဆီအကပ်ဆို၍ မိတောသည် ဆီကုန်နေကြောင်းအချက်ပြမီး လင်းနေသည်တိုင် နှစ်ရက်ခန့်မောင်းတတ်သည့် အကျင့်လေးက ရှိတတ်သေးသည်။
တစ်ခါကလည်း ကနေဒါအနောက်အလယ်ပိုင်း ဒေသမှ ကမ်းရိုးတန်းဘက်သို့ ဟိုင်းဝေးလမ်းကြီးပေါ် စကားတပြောပြောမောင်းလာကြရာဝယ် နောက်ခုံမှ ဂျူနီယာတော၏ အသံကထွက်လာလေသည်။
သူပြောမှ ဆီကိုကြည့်ရာ အကပ်လေးပဲကျန်ကာ မီးနီပြနေသည်ကို သတိထားလိုက်မိလေသည်။
`ဆီဆိုင်က နောက်ကမြို့မှာ ကျန်ခဲ့ပြီ..
လမ်းဘေးက ဆိုင်းပုဒ်မှာရေးထားတာ နောက်ထပ်ဆီဆိုင်ရောက်ဖို့ ××××ကီလိုမီတာ လိုဦးမယ်ဆိုရင် ခုနှုန်းတိုင်းမောင်းမယ်ဆို
နောက်ထပ်ဆီဆိုင်ရောက်ဖို့ အနည်းဆုံး လေးငါးနာရီမောင်းရဦးမယ်၊ လောက်မယ်မထင်ဘူး´
မိဘနှစ်ပါးကို ပြန်လည်တွက်ချက်ပြနေသဖြင့် စကားကောင်းနေကြသည်မှာ ဆီကုန်မှန်းတောင် မသိလိုက်သဖြင့် ရှက်သလိုလိုဖြစ်ရုံမက၊ သူမကို စိတ်ထဲက ချီးကျူး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ စိတ်တွေပူကာ ရှေ့ဆက်မောင်းရမလား၊ နောက်ပြန်လှည့်ရမလား တွက်နေမိသည်။ နောက်တစ်ဆိုင်ထိရောက်ဖို့ အကွာအဝေးနှင့် ကျန်မည့်ဆီ၊ လမ်းကလည်း တဝက်နီးနီးကို လွန်လာသည်မို့ ပြန်လှည့်လျှင်ကြာမည့်အချိန်နှင့် ကျန်မည့်ဆီကို တွက်ရတော့သည်။
ကိုရင်လည်း မိတောကဲ့သို့တွက်ချက်အပြီး နောက်ပြန်လှည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြရာဝယ်၊ ပြန်လှည့်စရာလမ်းများပင်မရှိ၊ အလယ်တွင် ချောက်ကြီးများသာရှိသော တစ်လမ်းသွားများ ဖြစ်နေလေသည်။
နေကလည်းဝင်တော့မည်။ ကနေဒါညနေခင်း၏ အအေးဓာတ်ကလည်း တိုးဝင်လာ၊ တောကောင်တို့ အရိပ်အရောင်များပင် မြင်နေရသည်။ ယခင်ကဆို နေဝင်ရီတရော ရေသောက်ဆင်းသော ဒရယ်ကြီးများ သမင်၊ ချေ စသည်များ၊ လမ်းကူးနေသော ဝက်ဝံကြီးများကို အရှိန်လျော့ချပြီး ရင်သပ်ရှူမော ကြည့်ရသည်မှာ အမော။
ဒီညဆီကုန်ခဲ့ရင်တော့ ဝက်ဝံတွေကြား အိပ်ရလေတော့မလား မသိဟု ကြောက်ကြောက်နှင့် တွေးမိတွေးရာ တွေးရင်း ကိုရင်သင်ပေးသည့်အတိုင်း ကနေဒါချောက်ကြီးများကို ရင်တမမဖြင့် ဖရီးရိုက်ဆင်းရင်း ပြန်ကွေ့နိုင်မည့် လမ်းကို ရှာရသေးသည်။
နောက်ဆုံး ဝက်ဝံများ တောကောင်များ လမ်းဖြတ်ကူးရန် ဆောက်ပေးထားသော လှိုင်ခေါင်းထဲမှတဆင့် ကွေ့ပတ်ကာ လာရာလမ်းအတိုင်း ပြန်လှည့်ကာ ဆီပြန်ထည့်ရသော အဖြစ်။
ထိုနေ့ကလည်း ကျောက်တန်းဘက်ကအပြန်၊ မိတောနားမလည်သော ဂျပန်လား၊ ကိုရီးယားသံလား မိန်းမအသံတစ်သံက ကားထဲတစ်နေရာမှ တောက်လျောက် ထွက်နေသဖြင့် ကိုရင့်ကို မေးရာဝယ်…
Filed under: ၀တ္ထု (Novels) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 5:30 am
ရုံးခွင့်ယူသောကြည်လင်သာယာသော နံနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ဂျူနီယာတောနှင့် ဂျူနီယာသာအေးကို မိတော ကျောင်းလိုက်ပို့လေသည်။
ကျောင်းမပို့ခင်တွင် အိမ်နောက်ဘက်မှ နို့ပုံးအဟောင်းများ၊ စက္ကူကတ်ထူဘီစကွတ်ပုံးလေးများ၊ သတင်းစာများထားသည့် ‘ပြန်လည်သုံးစွဲမည့်’ recycle ပုံးပြာကို တစ်ချက်ကြည့်မိသေးသည်။ ပုံးထဲတွင် ထားသည့် ပစ္စည်းများမှာ စီစီရီရီခြေရာလက်ရာမပျက်ဖြစ်ရှိနေသဖြင့် ကျေနပ်သွားလေ၏။ ထိုပုံးအပြာထဲသို့ထည့်မည့် ပစ္စည်းများကို မထည့်ခင်တွင် မိတောသည် ရေဖြင့် သေချာစွာဆေးကြောတတ်သည်။ စားစရာအနံ့အသက်များရလျှင် Raccoon ဟုခေါ်သော တောကြောင်ကဲ့သို့ အကောင်နက်ကြီးများက ဘီစကွတ်စက္ကူပုံးဟောင်းများကို လာလာဆွဲတတ်သောကြောင့်ပင်။ နို့ပုလင်း၊ နို့ပုံးများကို သေချာစွာရေစင်အောင် ဆေးသော်လည်း ထိုအကောင်ကြီးများက တစ်ချိန်လုံးလာလာဆွဲနေသဖြင့် နောက်ဘက်တွင် ပွယထနေကာ ရှင်းရလင်းရအလုပ်ရှုပ်သဖြင့် စိတ်အချဉ်ပေါက်လာသော တစ်နေ့တွင် မျှဉ်ချဉ်ပုလင်းဟောင်းတစ်လုံးကို ဆပ်ပြာဖြင့် သေချာစွာ မဆေးတော့ဘဲ၊ အဖုံးလေးကိုအသာဟကာ ပုံးထဲတွင် ထည့်ထားလိုက်သည်။ ထို့နေ့မှစပြီး မျှဉ်ချဉ်နံ့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပုံမရသော ကနေဒီယန် raccoon များသည်လည်း မိတော၏ recycle ပုံးအနားကို မကပ်ရဲတော့။
ထိုသို့… အိမ်နောက်ဘက်မှာ ရှင်းလင်းနေသဖြင့် စိတ်ချမ်းသာနေသော မိတောသည် ဂျူနီယာတောနှင့် ဂျူနီယာသာအေးကို လက်ဆွဲကာ ကျောင်းလိုက်ပို့လေသည်။
Filed under: ကဗျာ (Poems) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:36 am
Filed under: အတွေးအမြင်, ဆောင်းပါး — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 12:39 pm
စာရေးသူလည်း စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်က စာရေးဆရာမကိစ္စ စိတ်စွဲနေလို့၊ အိပ်မက်ထဲထိတောင် ထည့်မက်မိတယ်။ နောက်ရက်မှာတော့ စတော်ဘယ်ရီပင်ရိပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းရလာတာက အဲဒီစတော်ဘယ်ရီပင်ရိပ်ဟာ အထင်ကရ ဆရာကြီးတစ်ဦးရဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲကလို့ ကြားသိလာရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာပြည်မှာ စတော်ဘယ်ရီပင်ကြီး မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုတွေကိုလည်း ကြားနေရတော့ အဲဒီကိစ္စကို ပိုလို့စိတ်ဝင်စားလာမိပြန်တယ်။
စာရေးသူလည်း စတော်ဘယ်ရီပင်အကြောင်း ဆရာကြီးဘယ်လိုများရေးထားသလဲ သိချင်ဇောနဲ့ သူရေးခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင်ဝတ္ထု ကြီးကို ကျည်ဆန်ရထားထက်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ ဖတ်ပါတော့တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ စာရေးသူ စကားခံထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့မို့ ကျည်ဆန်ရထားထက်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ တစ်ပုဒ်ထဲတောင် မဟုတ်၊ နှစ်ပုဒ်၊ တစ်ပုဒ်ကို နှစ်ခေါက်စီ ဖတ်ပစ်လိုက်တာ၊ စတော်ဘယ်ရီပင်မပြောနဲ့ စတော်ဘယ်ရီစေ့နဲ့တူတာတောင် မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။
စာရေးသူဖတ်လိုက်တဲ့ ဝတ္ထုတွေကတော့ `မေ ´.. နဲ့ .. `မြိုင်´… ပါ။
‘မေ’ ဝတ္ထုဟာဖြင့် ရန်ကုန် နဲ့ ပဲခူးမြို့များမှာ အခြေခံလို့ စတော်ဘယ်ရီပင်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေသေးတယ်လို့မှတ်ပြီး အားလျော့မိတယ်။ ‘မြိုင်’ ကတော့ လားရှိုးတစ်ဝိုက်မှာ ဇာတ်လမ်းအခြေတည်လို့ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ နီးစပ်လာသလိုရှိပေမယ့်လည်း ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်တွေဟာ စတော်ဘယ်ရီသစ်ပင်အောက် ချိန်းတွေ့စရာမလိုအောင် ခေတ်ရှေ့ပြေးလို့ မြန်မာဂန္တဝင်အချစ်ဝတ္ထုတွေ များများစားစားသိပ်မဖတ်ဖူးတဲ့ စာရေးသူမှာ အနည်းငယ်ရှက်သလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်ရပေမယ့်လည်း ဆရာကြီးရဲ့ စာတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှတာကို စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီး ချီးကျူးလိုက်မိမလိုဖြစ်သွားသေးတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ်လိုစာရေးသူတစ်ဦးက ဆရာကြီးလို စာရေးသူတစ်ဦးကို ချီးကျူးသင့်မသင့် ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာတွေကြား တွေ ကနဲ.. တစ်ချက်ဖြစ်သွားလိုက်သေးသည်။
ကျမ မသိသော..စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်က စာရေးဆရာမသို့
Filed under: အတွေးအမြင်, စာစု — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 3:35 pm
စာရေးသူက ငယ်စဉ်ကတည်းက သရက်သီးလောက်ပဲ ကြိုက်တော့ စတော်ဘယ်ရီသီးကို ဂရုမစိုက်မိခဲ့ဘူး။ စတော်ဘယ်ရီချယ်ရီ သီချင်း မူရင်း Summer Wine ကိုတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေက ဖွင့်ရင်တော့ ကြုံလို့နားထောင်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် စတော်ဘယ်ရီချယ်ရီရောရင် အတော်အတန် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလည်း … အဲဒီသီချင်းကို ခံစားလို့ မရခဲ့ဘူး။
ရန်ကုန်က အချို့သူငယ်ချင်းယောင်္ကျားလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ချယ်ရီသီးဆိုတာတောင် ကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးခဲ့တော့ စတော်ဘယ်ရီချယ်ရီဆိုတာ ကာရန်မိအောင် ရောချပြီး စိတ်ကူးယဉ် သီချင်းလုပ်ရေးထားတာ၊ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ချယ်ရီကို ရောပြီး အရည်သောက်လုပ်လို့ မရဘူးတောင် လက်သီးလက်မောင်းတန်း အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ကို ဆိုခဲ့ကြသေးတာ။
ဒီလိုနဲ့ စတော်ဘယ်ရီတွေ၊ ချယ်ရီတွေ အပြုံလိုက်ပေါက်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့။ စာရေးသူအရင်အိမ်ရဲ့ခြံနောက်မှာတင် စတော်ဘယ်ရီပင်တွေ၊ ချယ်ရီပင်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်။ မြေသြဇာကလည်း လွှတ်ကောင်းတော့ စတော်ဘယ်ရီပင်တွေဆိုတာ အမြစ်ကလေးကျတာနဲ့ အတန်းလိုက်ကို ပေါက်တော့တာ။ မနိုင်နိုင်အောင်ပဲ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ အိမ်နောက်က စတော်ဘယ်ရီခင်းထဲမှာ စတော်ဘယ်ရီပင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုကို နားစွန်နားဖျားကြားလိုက်တယ်။ စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်က ထိုင်တယ်ဆိုလား။ စတော်ဘယ်ရီပင်ဆိုတာက ပုပုသေးသေးလေးကို ဘယ်လိုထိုင်မှာလဲ၊ အဲဒီအချစ်ဝတ္ထုရေးတဲ့ စာရေးဆရာမက မဟုတ်တာတွေရေးသလားမသိဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောနေတာကို နားစွန်နားဖျား ကြားလိုက်တာပါ။
စာရေးသူကလည်း ပြောရမယ်ဆိုရင် အချစ်ဝတ္ထုကို သိပ်ဖတ်ဖူးခဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်က ခုံမှာထိုင်တယ်လို့ ရေးတဲ့ စာရေးဆရာမကို ယခုထိ ဘယ်သူမှန်းမသိသလို၊ ဘယ်ဝတ္ထုမှန်းလည်း မသိဘူး။
Filed under: ကဗျာ (Poems) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:48 pm
မင်းရှိနေတဲ့ ဒီနေရာလေးကို မလာသင့်တော့ဘူးဆိုတာ သိနေပေမယ့်လည်း..
မင်းအရိပ်အရောင်လေး ရှိနေရာနေရာလေးကို မကြာမကြာ လာလာကြည့်နေမိတာ..၊
မင်းကိုပဲ တစွဲတလန်း တမ်းတနေသေးတာ….၊
ဘယ်တော့မှ ပြန်လှည့်မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ စွန့်လာခဲ့သော်လည်း…
အခု… မဆိုင်တော့ဘဲ..လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တရားချနေရတာတောင်မှ….
လွမ်းလို့.. ချစ်လို့…. အားမရနိုင်သေးတာ…
(စက်တင်ဘာ ခုနှစ်ရက်၊ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ့်ငါး)
Filed under: ၀တ္ထု (Novels) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:45 pm
ဒီနေ့ ဈေးသွားတယ်။ အာရှဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုပါ။ ဆန်အိတ်တန်းထဲမှာ ဆန်အိတ်မျိုးစုံကို လိုက်ကြည့်မိတယ်။
တိုင်းပြည်အမျိူးမျိူးက လာတဲ့ဆန်တွေ။ အိနိ§းယဆန်၊ ထိုင်းဆန်၊ ဗီယက်နမ်ဆန်၊ အာဖရိကဆန်… စသည်။
ဆန်အမျိုးမှာလည်း ဆန်သစ်၊ ဆန်ဟောင်း၊ ကောက်ညှင်းဆန်၊ ဘာစမာတီ၊ ဆန်ညို၊ ဆန်ဖြူ၊ ဆန်ဝါ၊ဆန်ရှည်၊ ဆန်တို… စသည်။
အိမ်မှာ ဆန်ရှိနေသေးပေမယ့် ကြုံတုန်းတစ်အိတ်ဝယ်သွားရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့… ဆန်မျိုးစုံကို လိုက်ကြည့်ရင်း…ဆန်အိတ်တန်းအလယ်လောက်မှာ ကြက်တံဆိပ်ထိုင်းဆန်တစ်အိတ်ပြုတ်ကျနေတာတွေ့လိုက်တယ်။ ချုပ်ရိုးကလည်း အနည်းငယ် ပြေသွားပုံရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆန်တွေ ထွက်ကျနေတယ်။
ကြက်တံဆိပ် ဆန်ထဲက ကောင်းတဲ့တစ်အိတ်ယူသွားရမလား စဉ်းစားရင်း ရပ်နေတုန်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာအချို့က ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် ကြည့်သွားတယ်။ သမံတလင်းပေါ်ကျနေတဲ့ ဆန်အိတ်ကိုတစ်လှည့်.. ကိုယ့်ကိုတစ်လှည့်…။
ဒီဆန်အိတ်ပြုတ်ကျတာ ကိုယ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရှင်းပြမယ်လို့တော့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။
အဲဒီချိန်မှာ… လက်တွန်းလှည်းကို တုန်ချိစွာတွန်းရင်း အဘွားတစ်ဦးက ဆန်တန်းထဲဝင်လာတယ်။
ဆန်အိတ်က လမ်းမအလယ်တည့်တည့်မှာမို့ လက်တွန်းလှည်းတစ်စင်းနဲ့ သွားနေတဲ့ အဘွားမှာ အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေပဲ ပြန်လှည့်သွားတယ်။
သူ့လိုအသက်ကြီးတဲ့ အခြားဈေးဝယ်လာသူတွေ ဆန်တန်းထဲ ထပ်ဝင်လာရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လက်ထဲကခြင်းကိုဘေးချပြီး လဲနေတဲ့ဆန်အိတ်ကြီးနား ငုပ်တုပ်ထိုင်ချ၊ ဆန်အိတ်ကို တန်းနားပြန်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဆန်အိတ်က အိတ်ကြီးဆိုတော့ တော်တော်လေးအားယူဆွဲရတယ်။
အဲဒီမှာ.. လင်းယုန်ခြေသည်းများကို အနီရောင်ဆိုးဆေးတင်ပြီး အလှပေါင်းတင်ထားသလား ထင်မှတ်မှားစေသော ခြေသည်းချွန်းများရှိတဲ့၊ ဖြူဖွေးသွယ်လျှလှပတဲ့ ခြေနှစ်စုံကပေါ်လာတယ်။
ဆန်အိတ်ကို တန်းမှာထောင်ထားပြီး မတ်တပ်ထစဉ်မှာပဲ.. ခုနက ခြေထောက်အလှပိုင်ရှင်၊ ဆန်စားသူအာရှသူ နှစ်ဦးက ကြမ်းပေါ်မှာလည်း မင်းလုပ်လို့ဆန်တွေကျနေသေးတယ်လို့ ပြောတယ်။
ဆန်အိတ်ပြုတ်ကျနေတာ.. တို့လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ တော့ ရှင်းပြဖို့စိတ်ကူး မရှိပေမယ့်… သူတို့ကို ကိုယ်ဖျတ်ကနဲမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ သူတို့က ဒေါက်မြင့်သံ တခွပ်ခွပ်ပေးလို့ အနားကထွက်သွားပြီ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်တော့
ကျနေတဲ့ ဆန်တွေကို သမင်လည်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ မိဘတွေဈေးအဝယ် အပျော်လိုက်လာပုံရတဲ့ ကလေးနှစ်ဦးက ဆန်တန်းထဲ ဆော့ရင်းကစားရင်း ပြေးဝင်လာတယ်။ တစ်ယောက်က ကြဲပြန့်နေတဲ့ ဆန်စေ့တွေကို နင်းမိပြီး ချော်လဲမလိုဖြစ်သွားတယ်။
ဆန်စေ့တွေကို ရှင်းလင်းမယ့်သူတစ်ဦးဦးရှိလေမလား ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံး တစ်တန်းဝင်တစ်တန်းထွက်လိုက်ရှာတာ… နောက်ဆုံးမှာ ဆိုင်အလုပ်သမားတစ်ဦး သွားတွေ့တယ်။
မကြာခင်ကမှ ရောက်လာပုံရပြီး၊ အဂ်လိပ်စာ ကောင်းကောင်းမတတ်သေးသူတစ်ဦး
ဖြစ်လို့ ဆန်အိတ်အကြောင်း မနည်းရှင်းပြလိုက်ရတယ်။
သူ့ကိုတော့.. ဒီဆန်အိတ်ပြုတ်ကျပြီးကွဲတာ.. ကိုယ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုပါ ပြောပြလိုက်တယ်။
အိမ်မှာလည်း ဆန်ရှိနေသေးတယ်။ တစ်ကယ်ဆို ကိုယ်ဟာ ဆန်တန်းနားတောင် သွားစရာ မလိုသူ။
သူ့ဟာသူ ဆန်အိတ်ပြုတ်ကျတာ တစ်ကယ်ဆို အနေသာကြီး.. ဒါကို ထပ်ပြီးဝင်ပါမိပြန်တယ်။ အဲဒီမှာ အရောင်စုံအတွေးတွေနဲ့ ကွက်ကြည့်ကြည့်သွားတဲ့လူမျိူးတွေ၊ ဆန်အိတ်ကွဲနားရပ်နေလို့ အဲဒီနားကလူရဲ့ ပရောဂ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေရှိတတ်ပြီး တန်းစွပ်စွဲတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရတယ်။
ဆန်အိတ်ကွဲတစ်လုံးက ကိုယ့်ကို သင်ခန်းစာတွေ ပေးရုံမက၊ အတွေးတွေကိုလည်း များစေခဲ့တယ်။
ဒီလိုမျိုး လမ်းပေါ်ကဆန်အိတ်ကွဲတစ်လုံးကို မမြင်ဟန်ဆောင် ရှောင်သွားခဲ့သင့်လား.. ဆိုတဲ့အတွေး…။
အသက်ကြီးကြီးဈေးဝယ်တဲ့ အဘွားကြီးတွေနဲ့ ပြေးလွှားဆော့ကစားတဲ့ ကလေးလေးတွေတွက် အကျိုးမမဲ့နိုင်ဘူး မဟုတ်လား…. ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ။
ကိုယ်ဘာကို ရွေးဦးမှာလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ။
Filed under: ခရီးသွားမှတ်တမ်း — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:35 am
နွေရာသီဆို တောင်တက်လို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။
တောင် မတက်တာ ကြာပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ နွေမကုန်ခင် တက်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ Intermediate hiking gears တွေပဲ ကိုယ့်မှာရှိတယ်။ Elevation နိမ့်ရင် ရိုးရိုး walking shoes နဲ့တက်ပြီး… elevation မြင့်လာရင် hiking shoes ဒါမှမဟုတ် mountain shoes နဲ့ သွားမယ် စိတ်ကူးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဖိနပ်ဘူးထဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိပ်မောကျနေတဲ့ mountain shoes အဟောင်းလေးကို ထုတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဖိနပ်ကအတော်လေးဟောင်းနေတာ….
တောင်ခြေရောက်မှ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ အသစ်တစ်ရံ ဝယ်သင့်လား။ဒီထက်မြင့်ရင်တော့ ကိုယ့် chains နဲ့ကိုယ် တက်ရပါမယ်။ အဲ့ဒါတွေ ရိုးသွားရင် rock climbing ပေါ့။
Filed under: ဆောင်းပါး — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 3:05 pm
Working hand in hand: Training & Cultural Exchange Programs
(အရပ်သားများအတွက် စစ်ဘက်မှ တံခါးဖွင့်ထားပေးခြင်း)
စစ်မှုထမ်းတွေ အရပ်ဘက်ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရပ်ဘက်ကလူတွေ စစ်တပ်ဘက်မှ အတွေ့အကြုံရယူကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေအတွက် နှစ်ဘက်လုံးက တံခါးတွေဖွင့်ထားကြတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
MEWDCOM (United States Army Medical Command) ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အရပ်သားဆရာဝန် သုံးသောင်းခန့် ပါရှိတယ်ဆိုတယ်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းဟာ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ စစ်သားတွေကိုသာမက၊ တပ်မှအနားယူသွားတဲ့ စစ်သား ၅သန်းကို ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်။ MEWDCOM သို့မဟုတ် Army Medicine Civilian Corps အဖွဲ့အစည်းဟာ အမေရိကန်ကြည်းတပ်လက်အောက်မှာ ရှိနေပေမယ့်လည်း အရပ်သားဆရာဝန်များဟာ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်စရာ မလိုသလို၊ အမိန့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းစေမှုတွေမှ ကင်းလွတ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရပ်သားကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေထဲမှာ တက္ကသိုလ် တက်ရင်း စစ်စည်းကမ်းလေ့လာလိုသူ၊ စစ်ထရိန်နင်တွေကို သင်ယူလိုသူတွေရှိတယ်။ အချိန်ပြည့် စစ်သား စစ်သမီးလည်း မဖြစ်ချင်ဘူး၊ စစ်သင်တန်းလည်း အချိန်ပြည့်မတက်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို လိုချင်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်တွေကို အချိန်ပိုင်း စစ်သား/စစ်သမီးလုပ်ခွင့်ပေးတာတွေကိုလည်း တွေ့ရတတ်တယ်။ တစ်ပတ်မှာ နာရီဘယ်လောက် စစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် စစ်တပ်တွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို သင်နိုင်သမျှသင်ယူပြီး အရပ်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ပေါင်းစည်းကာ ပိုမိုထက်မြက်လာအောင် ကြိုးစားချင်တဲ့ လူငယ်တွေကိုလည်း စစ်တပ်မှ အခွင့်အရေးပေးတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Filed under: ဆောင်းပါး — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:28 am
တစ်လောက စစ်မှုထမ်းများကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အရပ်သားဆရာဝန်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနက အခြားဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကို ဖဲကြိုးအနက်ကင်ပိန်းတွေ လုပ်ပြီး ပြသကြတယ်။
တပ်မတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်တဲ့ အရပ်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ရာထူးတွေတက်လာပြီး၊ တစ်နေရာမှာ bottleneck ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ အောက်ကတက်လာတဲ့ လူတွေကို နေရာဖယ်ပေးဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတွေ့အကြုံဖလှယ်ဖို့ စစ်ဘက်မှ အရပ်ဘက် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာရေးဌာနသာမက၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေဘက်ကို စစ်မှုထမ်းများကို ယခုလို ပြောင်းရွှေ့စေခိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ စစ်မှုထမ်းတွေနဲ့ အရပ်သားအရာရှိ၊ ဝန်ထမ်းတွေကြား ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲဖြစ်စေသလို၊ တပ်မတော်နဲ့ လူထုကြားမှာလည်း ပိုမိုပြီး သဘောထားကွဲလွဲစရာဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ထရိန်နင်တွေ၊ စည်းကမ်းတွေ မတူတဲ့ နေရာနှစ်နေရာမှ ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်အတူတူလုပ်ရတဲ့အခါ အရပ်ဘက်ကို ပြောင်းလာရတဲ့ စစ်သားတွေမှာလည်း အခက်ခဲတွေရှိမယ်၊ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရမယ့် အရပ်သားဝန်ထမ်းတွေမှာလည်း အခက်ခဲတွေရှိမယ်။ သူတို့ကြားမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပွတ်တိုက်အားတွေဖြစ်လာမယ်၊ အဲဒီအခါမှာ အထိခိုက်အနစ်နာရဆုံးဟာ တပ်မတော်နဲ့ ဝန်ကြီးဌာနများက အလုပ်ကျွေးပြုတဲ့ ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမလဲ၊ အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်း ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ တပ်မတော်ဆိုတာတွေ ရှိကြတာပဲ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကို သူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ။ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါက စစ်တပ်တွေနဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာ အလားတူကိစ္စမျိုးတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ကြလည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် လေ့လာကြည့်တယ်။
ဒီနေရာမှာ အရပ်ဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ စစ်အရာရှိတွေရဲ့ အမေးအဖြေဂဏများကို ဖတ်ရှုလေ့လာ၊ ထို့အပြင်.. ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေထဲက စစ်မှုထမ်းဟောင်း အချို့ကိုလည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် မေးမြန်းစုံစမ်းအင်တာဗြူးခဲ့ပါတယ်။
အရပ်ဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့ စစ်အရာရှိတွေထဲမှ လေ့လာဖတ်ရှု/နားထောင်ရတဲ့ သုံးဦးရဲ့အင်တာဗြူးတွေဟာ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ပထမတစ်ဦးကတော့ Vietnam စစ်ပွဲပြန် Marine officer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟားဗတ်ကျောင်းဆင်း Marshall N. Carter ပဲဖြစ်တယ်။ သူဟာ စစ်ဘက်မှထွက်ပြီး New York Stock Exchange မှာ Chairman အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ။ ဒုတိယတစ်ဦးကတော့ Orion International Recruiting မှာ Vice President တဖြစ်လဲ U.S. Marine Corps မှ ဗိုလ်မှူးကြီး Brian Henry ဆိုသူ။ တတိယတစ်ဦးကတော့ West Point ဆင်း၊ C.I.A. ဒါရိုက်တာဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး David Petraeus ဆိုသူရဲ့ အမေးအဖြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Filed under: ဘာသာပြန်, ငွေတာရီ, ၀တ္ထု (Novels) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:24 pm
ကျမရဲ့ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတိုလေးပါတဲ့ ၂၀၁၅ မတ်လထုတ် ငွေတာရီပါရှင်…
Filed under: ကဗျာ (Poems) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 7:29 pm
တစ္တေတွေ နံရံပေါ် တွားသွားတဲ့ ည…၊
လည်ချောင်းထဲက ပိုးကောင်တွေ အစာငတ်တဲ့.. ည၊
လက်ချောင်းထိပ်တွေ ကျင်စက်တို့ခံရသလို ခံစားချက်မဲ့နေတဲ့ည…၊
ကောင်းကင်ကလမင်း ခရမ်းပြာရောင်သွေးတွေ အန်ချတဲ့.. ည၊
ပြတင်းပေါက်က နွေဦးလေပြေ အရှက်ပြေတဲ့ ည၊
တေးသွားတွေ နံရံပေါ်က အလှပြလိပ်ပြာတောင်ပံတွေပေါ် ယစ်မူးတဲ့ည..၊
ချောင်းဆိုးဆေးတွေ… အသက်ငင်တဲ့ ည၊
စိတ်ဝိညာဉ်ငှက်တို့ အဆုံးစမဲ့ ကောင်းကင်ထဲ လွတ်လပ်စွာ လွင့်ထွက်သွားကြတဲ့ည၊
ထူးထူးဆန်းဆန်း မင်းကိုမလွမ်းတဲ့ ည၊
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေကျ အခုညကို အပြည့်အဝပြန်ရတဲ့ည….
Filed under: my notes, အတွေးအမြင် — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 12:49 am
(Bald eagles) တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းလေးတစ်ခုကို ဖတ်ဖူးနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒီစာကို မြန်မာတွေထဲမှာလည်း ဘာသာပြန်ပြီး ဖြန့်ဝေကြတာလည်း ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်။ မြန်မာတွေထဲမှာတော့ သိမ်းငှက်လို့ ဆိုထားကြတယ်။ လက်လှမ်းမှီသလောက် သိမ်းငှက်က hawk ဖြစ်ပြီး၊ လင်းယုန် က eagle ဖြစ်တယ်။ မြန်မာတွေဘာသာပြန်တဲ့ အချို့စာတွေမှာ အဲဒီအကြောင်းကိုရေးရာမှာ သိမ်းငှက် လို့ သုံးထားပြီး အချို့စာတွေမှာ လင်းယုန်လို့ သုံးထားတယ်။ သိမ်းငှက်နဲ့ လင်းယုန်ဟာ ဆိုက်ခြင်းလည်း မတူ၊ ဓလေ့တွေလည်းမတူတော့ မှားမှာစိုးလို့ ‘Bald eagles’ ကို ဒီစာမှာ ‘လင်းယုန်’ လို့ပဲ သုံးခွင့်ပြုပါ။
လင်းယုန်တွေဟာ နှစ်ပေါင်း ရ၀လောက်အသက်ရှင်ကြပေမယ့် အသက် ၄၀လောက်မှာ ဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲကို လုပ်ကြတယ်ဆိုတယ်။ နှုတ်သီးကိုချိုး၊ အတောင်တွေကို နှုတ်ပစ်ပြီး အသစ်ပြန်ပေါက်တဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ကြတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲသလို နှုတ်သီးနဲ့အတောင် ပြန်ပေါက်ဖို့ကို ငါးလလောက်စောင့်ကြရတယ်။ စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အသက် ၇၀ထိ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြလေသတည်းဆိုတဲ့ စာတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုကော မြန်မာလိုဘာသာပြန်တွေပါ ဖတ်ရတယ်။
အမေရိကန်တွေ (အနောက်နိုင်ငံသားအများစု) ကလည်း အသက် ၄၀ မှာ ဘဝစတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဆိုကြတယ်။ အဲဒါကလည်း ဟုတ်သင့်သလောက်ဟုတ်တယ်။ ဘဝက ပညာ၊ ငွေ၊ ကြင်ရာ၊ ဥစ္စာ၊ သားသမီး စသည်က အဲဒီအရွယ်လောက်မှာ အတော်အတန့်စုံလင်လာကြတာကိုး။ အဲဒီတော့ သူတို့ဘဝနဲ့ လင်းယုန်ဘဝကိုလည်း တန်းညှိပြီး ခံစားရတာကလည်း ကျေနပ်စရာတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ ဒီပုံပြင်ကို စဖတ်ရကြားရကတည်းက စိတ်ထဲက မတင်မကျ ခံစားရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လင်းယုန်တွေကို လိုက်ချောင်းလာတတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။
Filed under: my notes, အတွေးအမြင်, စာစု — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 11:59 pm
ဟိုတစ်နေ့က မီးလင်းဖိုအပေါ်ကတန်းကလေးကို ကျမ ဖုန်သုတ်နေရင်းနဲ့ တန်းပေါ်မှာ အလှတင်ထားတဲ့ sake အိုးလေးကို လက်နဲ့တိုက်မိပြီး sake အိုးလေး ကျကွဲသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီ အိုးလေးက ကျမ ဂျပန်သွားတုန်းက အမှတ်တယ ဝယ်လာခဲ့တာ။ ကျမက အဲဒီ sake အိုးအနက်လေးကို သိပ်ချစ်တာ။ အနက်ရောင်ပေါ်မှာ ရွှေရောင်ပန်းခက်လေးတွေနဲ့ သိပ်အနုပညာဆန်တဲ့ sake အိုးလေးဟာ အရက် မသောက်တတ်တဲ့ ကျမအတွက်တော့ အိမ်ရှေ့က မီးလင်းဖိုအပေါ်က တန်းဖြူဖြူလေးပေါ်မှာ အလှပြပစ္စည်းလေးပေါ့။
အခုတော့….. မထင်မှတ်ဘဲ မီးလင်းဖိုရှေ့က ကျောက်ပြားပေါ်ကို ပြုတ်ကျလို့ ကွဲအက်သွားခဲ့ရပြီ။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက… Ashikaga Yoshimasa ဆိုတဲ့ ရှိုးဂန်းတစ်ဦးက သူနှစ်သက်လွန်းတဲ့ ကြွေပန်းကန်တစ်ချပ်ကို တရုတ်ပြည်ကနေ ဝယ်လာခဲ့တယ်။ သူဝယ်လာတဲ့ ကြွေပန်းကန်လေးဟာ တစ်နေ့မှာ ကျကွဲသွားခဲ့တယ်။ သူဟာ ကွဲအက်သွားတဲ့ ကြွေပန်းကန်ကို မပစ်ရက်လို့ တရုတ်ပြည်အထိပြန်ပို့ပြီး ပညာရှင်တွေကို ပြန်ဆက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ တရုတ်ပြည်က ကြွေပညာရှင်တွေက ပန်းကန်ကိုပြန်ဆက်ပြီး ရှိုဂန်းကြီးဆီ ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ကြွေပန်းကန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အကျည်းတန်တဲ့နန်းကြိုးတွေနဲ့ ပြန်ဆက်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီအတွက် ရှိုးဂန်းကြီးက တော်တော်လေး စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ အဲဒီအဖြစ်ကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ.. ဂျပန်ပြည်က အိုးခွက်ပညာရှင်တွေဟာ အက်ကွဲသွားတဲ့ ကြွေပန်းကန်တွေကို လှပစွာ ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ အနုပညာ/ အတတ်ပညာတစ်ခုကို ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ Kintsugi လို့ခေါ်တဲ့ အိုးခွက်အနုပညာတစ်ခုဟာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်…။
Filed under: ကဗျာ (Poems) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 6:19 am
အာရုံကို အဝေးကို ပို့ထားခဲ့…..
Filed under: ၀တ္ထု (Novels) — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 2:02 am
ဖက်လို့မဝနိုင်အောင် နူးညံ့လွန်းတဲ့ ခေါင်းဦးပြာပြာရယ်..
မထိနိုင်မကိုင်နိုင်တဲ့ အမြင့်က မျက်နှာကြက်ပြင်ရယ်.. နဲ့အတူ..
ရူးမူးစွာတွယ်မိုက်… ခဲ့မယ် ဆိုရင်…..။
Filed under: တစ်မျက်နှာဝတ္ထု (Short Novels), စာစု — အိမ့်ချမ်းမြေ့ @ 12:12 am
သူမ ဒီရက်တွေမှာ ဘဝမှာ မဖြစ်ဘူးသောအရာများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ သူမသည်
မိဘအသိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် ငယ်စဉ်ကတည်းက လိမ္မာသူ ဟု တံဆိပ်တပ်ခံရသူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေဦးမည်။ ပျော့ပျော့လေးနှင့် မာသူ ဟုလည်း ဆိုတတ်ကြသေးသည်။ အချိန်အတော်များများ တစ်ဦးတည်းနေတတ်သော သူမသည် ဖြစ်သင့်သောအရာများကိုလည်း အမြဲတမ်းတစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့သူ။ ကံကောင်းထောက်မချင်တော့ သူမဖြစ်ချင်သောအရာများသည်လည်း ဖြစ်သင့်သော အရာများ ဖြစ်နေတတ်ခြင်းပင်။ တစ်ကယ်ဆိုလျှင်.. ဘဝမှာ အရာများများကို သိပ်မလိုချင်သူဟု သူမကိုယ်သူမလည်း ထင်ထားခဲ့မိသူ။
ပူလောင်သောအချစ်၊ မျှော်လင့်ရသောအချစ်၊ ဆွေးမြေ့ရသောအချစ်၊ တမ်းတရသောအချစ်၊ စိတ်ပျက်ရသောအချစ်၊ စိတ်ကုန်ရသောအချစ်၊ စသော အမျိုးအမည်များလှစွာသော အချစ်များစွာထဲတွင်မှ ညနေခင်းလေပြေလေးညင်သာစွာတိုက်ခတ်နေသလို အချစ်၊ အနားမှာထိုင်နေရရုံဖြင့် အရာရာပြည့်စုံသလို ခံစားစေသောအချစ်၊ သူနှင့်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံးမိန်းမတစ်ဦးလို ခံစားရစေသော အချစ် တစ်ခုကို သူမ ရွေးချယ်ခဲ့လေသည်။ တစ်ခါ.. ကံကောင်းထောက်မလွန်းစွာ ထိုအချစ်မျိုးကို ပေးဝေနိုင်သူသည် သူမ၏ခေါင်းမာမှုများ၊ သူမ၏စိတ်ကြီးတတ်ခြင်းများ၊ ယောင်္ကျားများနှင့်ရင်ဘောင်တန်းပြီး အတွေးခေါ်ချင်းစီးချင်းထိုးတတ်ခြင်းများ၊ ယောင်္ကျားတွေလုပ်နိုင်ရင် မိန်းမတွေလည်း လုပ်နိုင်တယ်ဆိုသည့် စိတ်များကိုလည်း ကျေနပ်နေတတ်ရုံသာမက၊ သူမအတွေးများကို ပိုမိုပြောင်မြောက်စေသူ ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။
သူနှင့်ချစ်သူရည်းစားဘဝက ငယ်ရွယ်သူ သူမ၊ တစ်စုံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကြီးကာ စီးထားသောဖိနပ်ကိုကန်ကြောက်ချွတ်ပြီး လူသူတိတ်ဆိတ်သော၊ စံပယ်ပန်းရိုင်းရုံများတန်းစီနေသော မြေနီလမ်းသွယ်လေးအတိုင်း ငိုယိုကာထွက်ပြေးခဲ့ဖူးသည်။ သူ ရှာမတွေ့နိုင်သော အဆောက်အဦးပျက်တစ်ခုနောက်တွင် နံရံကိုမှီကာ ငိုယိုနေခဲ့စဉ်၊ သူမချွတ်ထားခဲ့သော ဖိနပ်လေးကို ကိုင်ကာ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ရပ်ကြည့်နေခဲ့ဖူးသော သူ့ပုံရိပ်ကို သူမ မှတ်မိနေသေးသည်။
« အရင်စာမျက်နှာသို့ — အဟောင်းလေးတွေဖတ်ချင်ရင်.. »